musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » ER Vanachiremba Vanotsanangura Iyo Yakanakisa Omicron Dziviriro
Mhosva nyowani dzeOmicron musiyano weCCIDID-19 dziri kuwanikwa munyika yose uye American College of Emergency Physicians (ACEP) inokurudzira munhu wese kuti atore matanho kudzivirira kupararira kwehutachiona.
"Musiyano mutsva uyu weOmicron une chekuita asi isu tine maturusi ekuzvidzivirira isu tose," akadaro Gillian Schmitz, MD, FACEP, purezidhendi weACEP. "Patinodzidza nezvemhando nyowani iyi, zvakakosha kuti titevedze nzira dzakatapurwa kudzivirira kutapurirana kwehutachiona: geza maoko ako, pfeka mask mudzimba uye munzvimbo dzine vanhu vakawanda, uye ubaiwa kana uchikodzera."
Sezvo kufamba kwezororo kunotanga, Biden Administration yakatsanangura hurongwa hutsva hunosanganisira kuwedzera maski zvinodiwa pandege uye zvifambiso zvevoruzhinji uye kuita mamwe matanho anofanirwa kuwedzera kuwanikwa kwekudzivirira uye kusimbisa dziviriro yenyika pahutachiona sezvo nguva yechando inopinda.
Nyanzvi dzinobvuma kuti vaccine ndiyo dziviriro yakasimba kwazvo inowanikwa pamhando dzese dzeCOVID-19. Mushonga wakachengeteka uye unoshanda uye unokurudzirwa kumunhu wese ane makore mashanu zvichikwira. Imwe neimwe inowanikwa yekudzivirira inozadzisa zvakaomarara zvinodiwa zvakaiswa neFood and Drug Administration (FDA). ACEP inokurudzira vachengeti nemhuri kuti vabaye nhomba uye vatore matanho anodiwa kuchengetedza vana mukati memwedzi yechando. Vana havawanzo kurwara zvakanyanya kubva kuCOVID-19 pane vakuru, asi njodzi kubva kuCOVID ichiri yakakosha.
"COVID inogona kuva nengozi kuvarwere vezera ripi neripi uye njodzi dzinowedzerwa kune avo vanoramba vasina kubaiwa," akadaro Dr. Schmitz. “Zvakakosha kukoshesa maitiro akachengeteka nekuti tichiri pakati pedenda. Dziviriro yedu yakanakisa ndeyejekiseni kana tichida kutangazve mabasa edu enguva dzose nekudzivirira kurwara kwakakomba uye kuchipatara. "
Zvipatara mumativi enyika zviri pakakwirira, uye vazhinji vevarwere ivavo havana kubayiwa uye vari kurwara neCOVID-19. Vanachiremba vekukurumidzira vanodzokorora kukosha kwekuvimba nesainzi yakasimbiswa uye kudzivirira ruzivo rusina ruzivo, zvirevo zvakashinga, kana kurapwa ipapo nezveCCIDID, majekiseni kana marapiro ari kutenderera pasocial media kana pakati peshamwari. Pane kudaro, tsvaga ruzivo runotsigirwa nedata uye inotsigirwa nemasangano anotungamira.
"Kana iyo Omicron musiyano ikapararira nekukasira zvinoreva kuti varwere vakawanda vasina kubayiwa vachange vari mudhipatimendi rekukurumidzira. Zvichakadaro, nyaya dziri kuramba dzichiwanda uye zvimwe zvipatara zvedu zviri kuwanda kudarika zvazvinokwanisa,” akadaro Dr. Schmitz.
IAmerican College of Emergency Physicians (ACEP) isangano renyika rekurapa rinomiririra mushonga wekukurumidzira. Kuburikidza nekuenderera mberi nedzidzo, kutsvagisa, dzidzo yeruzhinji uye kurudziro, ACEP inosimudzira rubatsiro rwechimbichimbi pachinzvimbo chenhengo dzayo dze40,000 dzechiremba wekukurumidzira, uye vanopfuura mamirioni e150 vekuAmerica vavanobata pagore.